Iyo inemavara nyowani tambo sarudzo yako Apple Tarisa | Ndinobva mac
Iyo inemavara nyowani tambo sarudzo yeako Apple Watch
Nguva diki yasara kusvika nguva yechirimo yasvika uye nekuputika kwemavara mune zvakasikwa pachayo. Ndicho chikonzero nei tichida kukuratidza imwe sarudzo itsva yatakawana mumambure eakaiswa matambo eApple Watch kubva kuCupertino.
Icho chiunganidzwa chemabhande ane gumi nemaviri mapatani akasiyana ayo achazopa kubata kwevara kune yako Apple Watch. Iwo haasi mavara akajeka seaya ari kutengeswa neApple mumabhandi e fluoroelastomer uye ndizvo chaizvo zvinoita kuti chive chisarudzo chinokwezva kwazvo.
Kana iwe uchida kusunungura Apple Watch nekushandura tambo yayo, tinokurudzira gumi nembiri sarudzo huru dzinopa kubata kwekusiyanisa kune wachi yako. Sezvauri kuona mumifananidzo yatinobatanidza, iwe une maitiro ekutevedzera ingwe, mbizi kana ganda renyoka, pamwe nemireza yakasiyana kana mapatani ekufukidza.
Tambo idzi dzakagadzirwa ne fluoroelastomer, izvo zvinhu zvakagadzirwa nemhando yekutanga iyo Apple yaakatengesa. Unogona kuzvitenga muhurefu hwesayizi yega yega wachi, kureva kuti, une sarudzo mbiri dzeiyo 38mm wachi uye dzimwe mbiri dzimwe dzema 42mm wachi. Mutengo wayo ndeye 6,76 euros uye unazvo zviripo pane inotevera webhusaiti.
Pasina kupokana, iwo mukana wekupa yako Apple Tarisa imwe nyowani uye ndiwo mukana weiyi wachi, pamusoro pekuti software yayo inoipa zvakanyanya kwazvo kuita zvakasiyana ndeyekuti pfungwa yemhando yemabhande inoitawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Iyo inemavara nyowani tambo sarudzo yeako Apple Watch
Ivan Tomas Garcia akadaro
Kutonhora. Zvakaipa kuti chinongedzo chinoti hachiwanikwe pakutengwa. Uye chero sekutsvaga kwandakaita, kwete muAliExpress chete handikwanise kuvawana.
Pindura kuna Ivan Tomas Garcia
Chinja iyo nhamba yemifananidzo iriko pane yega yega skrini yeLaunchpad
Vhidhiyo yechipiri yeApple Park yakaonekwa kubva mudenga